Mee Azụmaahịa, Nweta Ego, bụrụ Onye Mmekọ nke Companylọ ọrụ
Nye m nkeji 1, aga m enye gị eto eto, mee nnwale.
Ajụjụ maka ngwa nnweta a
Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị kwadoro
Koodu echekwara nke ndi Ochichi
Nchekwa Abụọ Nlele Asambodo
Kedu ihe kpatara o ji dị mkpa maka azụmahịa gị na ego gị?
Mee Azụmaahịa, Nweta Ego
Otu esi eji?
Mee Azụmaahịa, kpata ego, bụrụ Onye Mmekọ nke Companylọ ọrụ
Anyị na-amalite usoro mmemme azụmahịa na Atoall.com ị ga-enweta azụmahịa n’onweghị gị.
will gha enweta ihe ga enyere gi aka na ahia ire ere Atoall Websaịtị 25% ga - enweta gi. Zitere anyị kaadị NJ gị, adresị na akara kọntaktị gị na atoall11@gmail.com maka ndebanye ma ọ bụ pinye aka Atoall na weebụsaịtị gị ma ọ bụ blọọgụ gị.
Ọ bụrụ n’inwe webusaiti ma ọ bụ blog, ị ga-ezipịa ngwa nnweta websaịtị gị na blog gị.
I nwekwara ike irite ezigbo ego. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ buru ibu ga - enweta ozi ngwaọrụ site na saịtị gị ma ọ bụ site na gị.
Ọ bụrụ na anyị enweta 10000 US $ site na weebụsaịtị wee nweta 2500 US $.
Nwere ike nweta aha weebụsaịtị dị na weebụsaịtị.com ma ọ bụ Google.com wee kpọtụrụ ha maka ngwa a.
You ga - eme ahia n’enweghi ego, na Linkedin, site na E-mail, Facebook, Whatsapp, wdg
Ọ bụrụ na ịchọrọ isi na ụlọ rụọ ọrụ ma ọ bụ nwee nkwarụ, ọ bụ ọrụ kacha mma ma ọ bụ azụmaahịa kacha mma maka gị.
Ọ bụrụ na ịnwee echiche azụmahịa ọhụụ ma ọ bụ azụmahịa ọ bụla, a ga-anabata gị.